Raggii loo heystay dilka weriye Hindiya Xaaji oo la xukumay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raggii loo heystay dilka weriye Hindiya Xaaji oo la xukumay
A warsame 25 February 2016 25 February 2016
Mareeg.com: Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta markii labaad u fadhiisatay dhageysiga dacwad ciqaabeed loo heystay eedeysaniyaasha kala ah; 1- C/risaaq Maxamed Barrow Caddow, 2- Xasan Nuur Cali Faarax, 3- Macalim Maxamee Abuukar Cali, 4- Maxamed Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere, 5- Muxudiin Cismaan Maxamed Cawaale iyo 6- Cali Xasan Aadan Tooni oo xafiiska xeer ilaalinta maxkamada ciidanka qlabka sida uu ku soo eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilkii Allaha u naxariistee Hindiyo Xaaji Maxamed Kheyrre ayaa lagu riday xukuno kala duwa.
Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Gaashaanle dhexe, Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in C/risaaq Maxamed Barrow Caddow ay maxkamadu ku riday xukun dil toogasho ah maadaama uu ahaa ninkii walxaha qarxa gaariga ugu xirey marxuumad Hindiyo Xaaji.
C/risaaq Maxamed Barow, ayaa sidoo kale waxaa lagu heley dambi ah in uu Al-shabab u qaabilsanaa dabagalka iyo sahaminta dadka wax galka u ah bulshada Soomaaliyeed oo kooxdaasi doonayso in ay dhibaateeyaan.
Sidoo kale maxkamadda ayaa xukun xabsi daa’im ah ku riday eedeysanayaasha kala ah; Xasan Nuur Cali Faarax, Macalim Maxamed Abuukar Cali iyo Macalim Maxamed Sheekh Yuusuf, maadaama ay qirteen in Al-shabab ay u qaabilsanaayeen faafinta afkaarta kooxdaasi isla markaana ka shaqeyn jireen dugsiyo lagu fidiyo fikirta Al-shabaabnimada ah.
Maxkamadda ayaa eedeysanayaasha kala ah: Muxudiin Cismaan Maxamed Cawaale iyo Cali Xasan Aadan Tooni, waxaa ay ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah, maadaama ay la shaqeyn jireen Al-shabaab.
Sadexda bishii 12 ee sanadkii 2015 ka ayaa Al-shabab waxaa ay magaalada Muqdisho ku dileen Allah u naxariistee Hindiyo Xaaji Maxamed Kheyre oo kamid aheyd shaqaalaha Radio Muqdisho iyo Telefishinka qaranka.
Imaaraadka oo xayiraadda ka qaadaya xoolaha Soomaaliya
Maamulka Galmudug oo lagu wareejiyay Gaadiid dagaal, hub iyo ciidan+Sawirro